မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ငရဲကြီးရှစ်ထပ်ဆိုတာကို နော်ဝေးနိုင်ငံနှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံမှ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များကအတည်ပြု | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ငရဲကြီးရှစ်ထပ်ဆိုတာကို နော်ဝေးနိုင်ငံနှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံမှ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များကအတည်ပြု
မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ငရဲကြီးရှစ်ထပ်ဆိုတာကို နော်ဝေးနိုင်ငံနှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံမှ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များကအတည်ပြု
Posted by နွယ်ပင် on Feb 16, 2011 in News | 18 comments
ကျနော်တို့ မြေကြီးရဲ့ေမြေအောက်အလွှာတွင် ရွေ့လျှားမှုအကြောင်းလေ့လာကြတဲ့
ဆိုဗီယက်နိုင်ငံမှဘူမိဗေဒပညာရှင်များနှင့် ပြည်ပကငှာရမ်းထားတဲ့ ဖင်လန်နိုင်ငံနဲ့
နယ်စွန်တစ်နေရာတွင် မြေအောက်ဆိုက်စမစ်တူးဖော်နည်းနှင့် တူးခဲ့ကြပါတယ် ။
နေလို့ထိမ်းမရအောင်လှုပ်ရမ်းနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ တွေ့ ရှိပါတယ် /
အဲဒီအခါမှာတော့လုံးဝမခံမရပ်နိုင်အောင်နာကျင်တယ်လို့အော်ဟစ်နေကြတဲ့အသံကိုစတင်ကြားရပါတယ်။
့ဒေါက်တာ ဒီမီထရီအက်ဇာကော့ ကဆိုပါတယ်။ သေချာအောင်လို့ အသံဖမ်းစက်ကိုတွင်းထဲချပြီး အသံဖမ်းနားထောင်တဲ့အခါမှာတော့
အဲဒီအသံနဲ့ အတူလူပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာသို့ မဟုတ် သန်းပေါင်းများစွာရဲ့ အော်ဟစ်ငြီးငြူနေကြတဲ့အသံကိုလဲ
ကြားလိုက်ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာဒေါက်တာ
အံ့သြတုန်လှုပ်မှုများစွာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် အဲဒီအသံတွေကိုအလွန်ဆွဲအားကောင်းတဲ့အသံဖမ်းစက်တွေနဲ့ အသံကူးထားလိုက်ပြီး
့ကိုပြောပြနေတဲ့ဟာတွေကတွင်းတူးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ ဒီမီထရီအက်ဇာကော့ နဲ့ တွင်းတူးအဖွဲ
လစဉ်ထုတ်စာစောင်ကရေးသားဖော်ပြကြတယ် ။ ဒီကျနော်တို့ ကမာမြေကြီးရဲ့အောက်
ိုးမိုင်မှာ သိပ်ကိုပူလောင်တယ်လို့ သိခဲ့ရပါတယ်။ အခုကျနော်တို
ကိုးဆယ့်ငါးလောက်ပဲရှိတယ်။ မြေကြီးအောင်ကိုးမိုင်အကွာကအပူချိန်ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် 2000ရှိတယ်လို့
တွက်ချက်သိရှိရတယ် ။ သူတို့ မူလခန့် မှန်းထားတဲ့အပူချိန်ထက် ဆယ်ဆလောက်တောင်များနေတယ်လို့ တွင်းတူးအဖွဲ
့ဝင်နော်ဝေးနိုင်ငံဘူမိဗေဒပညာရှင် ဘာနီနန်မီဒယ် ကဆိုပါတယ်.။ တွင်းတူးအဖွဲ့ ဝင်နော်ဝေးနိုင်ငံဘူမိဗေဒပညာရှင်
ဘာနီနန်မီဒယ်နှင့်ဘူမိဗေဒပညာရှိချုပ် တို့ ဟာ နော်ဝေးနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးနှင့် အောင်မြင်ကျော်ကြားမှုအရှိဆုံး
တွေ့ ဆုံမေးမြန်းခဲ့တယ်။ ဘာနီနန်မီဒယ်ပြောတာတွေကိုသတင်းစာမှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြတယ်
။အဲဒီသတင်းစာမှာတော့… ဒီကမာကြီးရဲ့အောက် ကိုးမိုင်းအကွာမှာ ငရဲပြည်ဆိုတာတကယ်ရှိနေပြီ
ဒီလိုတွေ့ ရှိမှုတွေပြီးတဲ့ နောက်မှာ နော်ဝေးနိုင်ငံနဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံမှ.ဘူမိဗေဒပညာရှင်တချို့
အမှန်တစ်ကယ်ဖြစ်ရပ်က သူတို့ ငှားရမ်းထားတဲ့နိုင်ငံခြားသားအားလုံးကို. တွေ့ ရှိချက်အပြီးနှစ်ရက်အကြာမှာ
ငွေပေးပြီးနှုတ်ပိတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ ငွေဘယ်လောက်ဆိုတာကိုတော့တွင်းတူးအဖွဲ
့အသက်လဲဆိုးရိမ်ရပါတယ်ဟုလဲ ပြောခဲ့ပါတယ် ဆိုဗီယက်အာဏာပိုင်တွေဟာ ထိုငြီးငြူသံတွေကို
ဆိုတဲ့လူရေးခဲ့တဲ့စာပါပဲ။ သူဟာ.နော်ဝေးနိုင်ငံ တရားရေးဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီးရဲ့ အထူးအတိုင်ပင်ခံတစ်ယောက်လဲဖြစ်တယ် ။ စာရေးတဲ
့နေ့ စွဲက ၁၉၉၀ခု ဇန်န၀ါရီလ ၇ ရက်နေ့သူ့ စာထဲမှာရေးခဲ့တာကတော့ ၁၉၈၉ ခု ခရစ်စမစ်ရုံးပိတ်ရက်မှာသူက
ဒါပေမဲ့မကြာပါဘူး ပြည့်ပြည့်စုံစုံရေးထားတဲ့ နော်ဝေးနိုင်ငံမှ စာတန်းကိုဖတ်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့
သူဟာအရမ်းအံ့သြတုန်လှုပ်မိပါကြောင်းနှင့် နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ ကို ဘုရားသခင်ထံမှာအပ်နှံကြောင်းနှင့် လုံခြုံတဲ့နေရာမှာထားပေးကြပါလို့ 
အခု အသံဖိုင်ကိုဖွင့်ကြည့်ရင် အရင်ဆုံး ရေဒီယိုကြေငြာသူရဲ့ စကားသံကိုကြားရပါမယ်
အသံတွေကတော့ လုံးထွေးနေပါတယ် … နားကြပ်နဲ့နားထောင်ရင် ပိုအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်
အခုလေးတင်ပဲ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပို့ပေးလိုက်တဲ့ Forward မေးလ်လေးတစ်စောင်ပါ . တကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆော့ မသိပါဘူး ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ ..
တကရ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့ မသိဘူး။ အသံဖိုင်ကို နားထောင်ရတာတော့ … ကြောက်စရာကောင်းတရ်။
ဒီမှာ အသံဖိုင် ဘယ်လိုတင်ရမှန်းမသိလို့ အသံဖိုင်ကို နားထောင်ချင်သူများ၇ှိရင်ပြောပါ ပို့ပေးပါ့မယ် …
i want to listen … pls sent to me banmyotdaw@gmail.com thanks^_^
အသံဖိုင်ကို ဘယ်ကိုပို့ပေးရမှာလဲဟင် .. ပို့ပေးရမယ့် လိပ်စာမှမသိပဲ …
ကမ္ဘာ့ဘာသာကြီးတွေအကုန်လုံးမှာ ငရဲရှိတယ်..။ နတ်ပြည်ရှိတယ်..။
ဆိုတော့.. နော်ဝေး နဲ့ဖင်လန်နိုင်ငံက ပညာရှင်တွေက ..အနောက်နိုင်ငံဆိုတော့ .. ခရစ်ယန်ဖြစ်မှာပေါ..။
အဲဒါ.. အဲဒီတွေ့ရှိချက်ကို .. ဘယ်ကဘယ်လို… ဗုဒ္ဓဘုရှားရှင်အမည်ယူသုံးလိုက်သလဲတော့မသိ..။
ဘာတဲ့..“မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ငရဲကြီးရှစ်ထပ်ဆိုတာကို နော်ဝေးနိုင်ငံနှင့် ဖင်လန်နိုင်ငံမှ ဘူမိဗေဒပညာရှင်များကအတည်ပြု” လုပ်ချလိုက်ပါလေရော..။
ပြောချင်တာက .. အဲဒီသတင်းက လံကြုပ်..လုပ်ကြံကြီးလို့ပါပဲ..။
ဖြစ်တာရော..သတင်းရောက .. ကြာလှပြီ..။
အသေးစိတ်သိချင်ရင်.. အောက်က ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ သွားဖတ်ကြပေါ့နော..။
အဲ.. အသိတွေလည်း.. အကြံအဖန်ကြီးဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြလိုက်ပါဦး..။
http://en.wikipedia.org/wiki/Well_to_Hell_hoax ၀ိကိက လံကြုပ်ကြီးဖြစ်ကြောင်းပြောတာ..။
http://spi.com.sg/spi_files/soh/main.htm စင်္ကာပူက အသံဖိုင်ကို လေ့လာထားတာ..။
http://christianparanormalresearchsociety.wordpress.com/2011/01/11/the-%E2%80%9Cwell-to-hell%E2%80%9D-hoax-%E2%80%93-according-to-the-cprs/ -ခရစ်ယန်တွေက လုပ်ကြံဇတ်လမ်းကို သုတေသနပြုထားတာ..။
( တင်တဲ့ သူကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.။ အဲဒီလို အငြင်းပွားစရာ စာတွေ တင်ပေးစေလိုပါတယ်.။ မြန်မာတွေ .. ငရဲနဲ့ခြောက်၊ ဘုံနဲ့မြှောက် မခံရတော့ပဲ. အမှန်သိရတာပေါ့..)
ရွာထဲကို ၀င်ကြည့်ဖြစ်နေတာတော့ ကြာပါပြီ says:
အင် လို့တော့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုိခိုင်ရှင်းပြလိုက်တော့ ပိုရှင်းသွားတာပေါ့။ကျေးဇူးပါ။
တို.သဂျီး မောင်းခေတ်ပီး ကြေငြာမှ ဒို.တွေလဲ ရှင်းတော့တရ် …
ရှေ.တစ်ပါတ်က … သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုအသံဖိုင်ပို.ပေးလိုက်တော့ … ငါမကောင်းမှုတွေမလုပ်တော့ဘူး … ငရဲအသံကို ကြားရတော့ ကြောက်သွားတရ် … အခုတောင်အရက်မသောက်တာ တစ်ပါတ်ရှိပီ … ဆိုပဲ … အသလွတ်ကို ဇွတ်လိမ္မာသွားတာ … ဟီးးး
အရက်ကို အဲဒီလို ငရဲကြောက်လို့ဖြတ်တာမျိုးက … တကယ်မပြတ်ပါဘူး.။
နတ်ပြည်နဲ့ မြှောက်လိုက်ရင် ပြန်သောက်မှာပါပဲ..။
အရက်ဆိုတာ ..မူးတယ်..။ များများသောက်ရင် သတိလက်လွတ်ဖြစ်တယ်.။ အမှတ်သတိလွတ်ရင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်.။
ဒီလိုမဖြစ်အောင် အရက်ကို သတိလက်လွတ်ဖြစ်အောက် မသောက်ဖူး ဆိုတာမျိုးဖြစ်ရမှာ..။
ဒီစာကို ..မနက် ၃နာရီမှာ..၀ိုင်သောက်ရင်းရေးတာ…။
သူတစ်ပါးကိုလည်း မကောင်းတာလုပ်ဘို့ တိုက်တွန်းတယ်………….တဲ့
အင်တိုင်ဘိုင်အိုးတစ်ဆေးဝါးတွေဟာ ခန္တာထဲက ကောင်းတဲ့ပိုးမွှားရော..။မကောင်းတဲ့ပိုးမွှားရော..သေစေတယ်..။
ဆရာဝန်တွေက .. ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း နေမကောင်းရင်..အဲဒါတွေလုပ်(သောက်)တယ်………..။
သူတစ်ပါးကိုလည်း အဲဒါတွေလုပ်ဘို့ (သောက်ဖို့)တိုက်တွန်းတယ်………….။
အဲ့ဒိအပါက်ကိုနည်းနည်းချဲ့ ပြီးတော့ ချီလီမိုင်းလုတ်သား တွေကိုကယ်သလိုမျိုးကယ်ထုတ်လို့မရဘူးလားအရပ်ကတို့… ကုသိုလ်လိုချင်လို့ပါ ဟဲဟဲ..
အင်း…ငရဲ ငရဲ။ နေပါဦး….နာကျင်ပါတယ်လို့မခံမရပ်နိုင်အောင် အော်ဟစ်နေတာ ဘယ် ဘာသာစကားနဲ့ လဲ။
မြန်မာဘာသာနဲ့ အော်နေတာလား သိုးဆောင်း စကားနဲ့ အော်နေတာလား။ Kangaroo လို့ နာမည်ပေးသလို ဖြစ်နေဦးမယ်။ သြစတေးလျန်းတွေပြောတဲ့ “Kan Ghu Ru” ဆိုတာက “We
don”t understand you ” ပါတဲ့
ဒါနဲ့ စကားမစပ် တွင်းတူးတဲ့ ပိုက်လုံးက ဘာသတ္တုနဲ့ လုပ်ထားတာဖြစ်မလဲ။ အပူမကြောက်ဘူးလား။ အပူအရှိန်မှာ ပျော်မသွားနိုင်ဘူးလား။
Yes, Sue is right, we should think deeply step by step, before accept something new. Sound Recorder also can melt down in that stage of temperature( 1100 ‘C ). If that finding is really, they must study to proof the world, because they are scientists. Now just they hear some sound, they stop their job immediately. Please think about it.
ဒီမှာ ရှိတယ်ဗျို့ 
ှုငရဲပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ ကြားဖူးတာလေးတခုကို food for thought ပြောချင်တယ်။ ငရဲဆိုတာကို ရုပ်ဝတ္တုဆန်ဆန် လက်တွေ့ကျကျ တွေးတတ်သူများအဖို့ပါ။ ယောဂီတဦး တရားထိုင်ရင်း သမာဓိအား ကောင်းလာတော့ ငရဲပြည်ကိုမြင်ရတယ်။ လွန်လွန်ကြူးကြူး အနှိပ်စက်ခံ နေရတာတွေမြင်တော့ သူ့စိတ်ထဲမှာ ‘ငရဲသားတွေကလည်း ဒီလောက်ခံရတာတောင် မသေနိုင်ဘူးလားလို့ တွေးမိတယ်။ အဲဒီ့အခါ ငရဲခံနေရသူတွေက ငရဲဆိုတာ ခံစားဖို့၊ မကျွတ်သ၍ မကုန်ဘူး၊ သေပြီးချက်ခြင်းပြန်ဖြစ်တယ်လို့ အော်ပြောကြတယ်’။ ယုံတာမယုံတာ ကိုယ့်သဘော။ ပေးခြင်တာ ငရဲပြည်သည်ခံစားဖို့ဆိုတဲ့ အဓိပါယ်လေးပါ။